VALAN-JAVABOARY AO ANKARAFANTSIKA : Hentitra ny Filoha ny amin’ny hifehezana ny afo
Tafiditra ao anatin’ireo valan-javaboary arovana eto Madagasikara ny ao Ankarafantsika. 4 octobre 2019
Nampivarahontsana anefa ny tranga niseho tany an-toerana satria velaran-tany mirefy amina hekitara maro no kila forehitry. Afo tsy fanta-piaviana ary niniana natao raha ny fanadihadian’ny mpitandro filaminana. Tsy azo ekena intsony ny mbola hiveren’ny tranga fahamaizana goavana mihoa-pampana tahaka ireny, hoy ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina. Nandritra ny filan-kevitry ny Minisitra izay notanterahina tamin’ny alarobia lasa teo no nandraisany fepetra manokana mahakasika ity valan-javaboary arovana ao Ankarafantsika ity.
Nanome toro marika araka izany ny tenany ny handraisana andraikitra faran’izay hentitra, mba tsy hiverenan’ny afo ao Ankarafantsika intsony. Ilaina, hoy izy, ny fifehezana maika mba tsy hisy afo mirehitra intsony na sanatria mbola firehetan’ny afo vaovao indray. Manoloana izany dia anisany fepetra noraisin’ny Filoha ny hanetsehana ireo fitaovana rehetra avy eto an-toerana na avy any ivelany ahafahana mamono haingana dia haingana izay mbola mety ho afo mipoitra na ivelan’ny valan-javaboary na ao anatiny. Ankoatra izay dia nisy ihany koa ny fivoriana maika izay hotarihan’ny Praiminisitra Ntsay Christian miaraka amin’ny Minisitry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra ary ireo mpiara-miombon’antoka vahiny.
Fivoriana ho entina hitadiavam-bahaolana maharitra amin’ny fahamaizana miverimberina ao Ankarafantsika sy amin’ireo valan-javaboary arovana eto Madagasikara. Nanamafy ihany koa ny Filoha Andry Rajoelina fa mila atao mafonja ny fanentanana mipaka any amin’ireo olom-pirenena mba tsy handoroan’izy ireo tanety. Manomboka izao dia hosaziana ary mihatra ny lalàna ho an’izay tratra mandoro tanety.
Mbola nisy ninia nandoro, lehilahy 5 voasambotra
Ny alarobia tamin’ny telo ka hatramin’ny dimy hariva koa dia nisy afo indray tao amin’ny valan-javaboarin’Ankarafantsika izay fanahy iniana. Lehilahy miisa dimy indray no voasambotra taorian’ny fanadihadiana mialoha. Izany dia ahafahana mandroso hijerena ny antony nahatonga ny afo. Amin’izy dimy ireo dia roa nanapaka hazo anaty parka, ny iray nanao saribao, ary ny roa nanadio tany tamin’ny alalan’ny afo ka niitatra hatrany amin’ny valan-javaboary. Hatolotra ny Fitsarana ato ho ato izy ireo. Niezaka nifehy ny afo ny mpitantana ny parka.
Tombanana ho 10 ha indray ny may tamin’io ka tany fambolena ny ilany ary ny moron’ny parka kosa ny ilany. Hatreto dia mbola tsy fantatra ny niavian’ny afo, saingy nalaky voafehy noho ny fiaraha-misalahy. Taona vitsivitsy izay no efa nanao tatitra tsy mitsahatra ny mpisehatra ara-tontolo iainana eto Boeny fa miha ripaka ny ala manamorona ny làlam-pirenena fahaefatra sy ny manodidina ary ny ao anatin’ny valan-javaboarin’Ankarafantsika, distrikan’Ambato Boeny.Voalazan’ireo mpanao fanadihadiana ifotony sy araka ny fitarainan’ny mponina tompon-tany amin’ireo faritra ireo fa ireo olona mpifindra monina aman-jatony avy any Atsimon’ny Nosy no tena mandripaka sy manimba ireo ala ireo. Tsy ny ala ihany no ahiana ho ringan’ireto mpifindra monina ireto, hoy ny mpitantana ny valan-javaboary fa ireo gidro sy vorona 130 karazana ao anaty ala, izay ny 66 karazana amin’ireo dia tsy fahita eran-tany raha tsy ao an-toerana irery ihany.
Nisy ny ezaka nataon’ny lehiben’ny Faritra mpisolo toerana niaraka tamin’ny prefe ary ireo talem-paritry ny sampan-draharaham-panjakana voakasika ka nidina ifotony izy ireo nizaha ny zava-misy sy nitafa tamin’ny mponina. Taorian’izany dia nisy ny fitadivana vahaolona hamehezana ny fivezivezen’ny mponina avy any Atsimo sy ny vahiny hafa, ny hampihenana ny hamaizana ny fanimbana ny fananana iombonana ataon’izy ireo ao anatin’ny valan-javaboary, ary ny mba hiarovana ny hoavin’ny mponina efa nitoetra sy nanajary ara-dalàna ny toerana.
Efa nisy ihany koa fandravana ny lasin’ny olona tsy manara-dalàna anaty alan-javaboary sy famotehana ny volin’izy ireo. Tao ihany koa ny fandraisana nataon’ ny olom-panjakana taorian’ny fifampiresahana fa hoesorina tsy misy hatakandro ireo mpifindra monina izay tsy mety hisoratra ao anatin’ny bokim-pokontany ary voamarina fa mpanimba ny fananana iombonana. Hatreto dia mbola tsy nahitam-bokatra mivaingana ireo hetsika ireo. Indrindra moa fa tsy ny mpiavy irery no manao fandikan-dalàna fa misy ihany koa mponina ao an-toerana. Antenaina fa hanova zavatra ny fandraisana andraikitra ataon’ny Fitsarana ka miditra amin’ny famonjana ireo mpandika lalàna.
Nangonon’i Vanessa sy Avotra Isaorana